Etu esi esi nri Steak zuru oke - Ezi Ntụziaka
ogologo oge ole ka m ga-esi esi soseji italian
ahuekere butter osikapa krispie Ogwe na chocolate topping
achicha chocolate na banana pudding ndochi
ihe na-aga nke ọma na salad ọkụkọ
Esi Esi nri nke zuru oke! Nwere ike ịme steaks ụlọ steak na-atọ ụtọ ma dị nro n'azụ ụlọ gị! Nke a bụ ndụmọdụ m kachasị elu maka izu oke ibe anụ!
Tinye ya na Ogwe osisi gị ka ịchekwa ya maka oge ọzọ!
Amụtara m otu esi esi nri steak zuru oke na bootcamp ụlọ akwụkwọ nri n'afọ gara aga. Iberi mmiri nke anụ ụlọ zuru oke n'azụ ụlọ gị dị ezigbo mfe! ’Re na-achọ ụtọ ekpomeekpo, caramelization ma sie anụ ahụ ọkụ kwesịrị ekwesị.
Mgbe ị na-esi esi nri, m na-eji oke okpomọkụ ekpochi ihe ọ theụ theụ na ụtọ ya wee kpoo ya na okpomọkụ na-enweghị isi iji rụchaa usoro nri.
grilled cheese na tomato Sanwichi uzommeputa
Kingsford®Ọkachamara Briquets na-enye oke ọkụ zuru oke maka ụdị efere steakhouse (enwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa ngwaike). Iji a unyi imi na-enye ihe incredibly flavorful sear and a delicious steak.
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ nhọrọ dị ukwuu maka steaks ị ga-etinye na imi mmiri, m na-eche n’onwe m na otu n’ime steaks kachasị mma maka imeri ihe bụ ribeye (ma ọ bụ akpịrị steak) Ọ nwere ọtụtụ nke ịlụ na-eke zuru okè obi & kemmiri ihe ibe anụ. Nnukwu nhọrọ ndị ọzọ gụnyere obi ebere ma ọ bụ sirloin.
Kwadebe Nri Gị
Tụkwasị icheku ọkụ gị n'otu akụkụ nke imi ihe ahụ na-enye gị ohere ịnwe nnukwu okpomọkụ n'otu akụkụ maka ịda na ọkụ na-enweghị isi maka ịmechaa anụ ahụ. Nke a na - eweta steakhouse steak zuru oke!
Kpochapu icheku ọkụ site na ịtụkwasị Kingsford®Ọrụ Briquets na mkpọmkpọ ebe n'akụkụ otu akụkụ nke imi ihe.
Iji ọkụ, mụnye icheku ọkụ ma nye ihe dị ka minit 15 ka ire ọkụ ahụ nyụọ ya na icheku ọkụ na-acha ntụ.
Mmanụ imi ihe tupu ịtinye steaks ahụ site na ịtụkwasị mmanụ na akwa nhicha akwụkwọ ma jiri nkịta iji tee mmanụ na imi ihe.
Kwadebe steaks gị
Wepu steaks na friji ma dozie ya na nkeji 30-60 tupu ị ghee ya.
Wepu ihe buru ibu buru ibu buru ibu na mpempe dị na mpụga iji zere iwe ọkụ. Kpoo abụba ọ bụla fọdụrụ na nsọtụ nke ibe anụ ahụ ka steak ahụ ghara ịgbanye ka ọ na-esi nri.
Tupu ị ghee, mee ka steaks gị nke ọma na nnu na ose ma ọ bụ ngwakọta kachasị amasị gị.
Debe steaks n'akụkụ kacha ekpo ọkụ nke grill (ebe icheku ọkụ dị) wee chọọ. Mara: Iji nweta usoro obe, debe steak na akụkụ iri anọ na ise. Mgbe otu nkeji gachara, tụgharịa ogo 90. Tinyegharịa n'akụkụ nke ọzọ.
Nọgide na-esi nri karịrị okpomọkụ na-enweghị isi na ọnọdụ okpomọkụ achọrọ (usoro a na-ebipụta ebi n'okpuru).
Ozugbo ibe anụ ọhịa ahụ eruola okpomọkụ achọrọ, wepụ ya na imi ihe & elu ya na butter ma ọ bụ butter butter.
Zuo 5 nkeji tupu ị na-eje ozi iji kesaa ihe ọicesụ juụ.
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nri10 Nkeji Oge zuru ezu25 Nkeji Ọrụabụọ steaks Onye edemedeHolly Steaks zuru oke nke ga-ama oke nri ọ bụla! Bipute Ntụtụ
▢abụọ Ribeye steaks (1 'ọkpụrụkpụ)
▢Nnu & Ose ma ọ bụ anụ anụ ahụ na-atọ ụtọ
Pasili Garlic Butter
▢1 osisi nke bọta nnu (1/2 iko), gbanwere
▢1½ teaspoons ihe ọ juiceụ juiceụ lemon
▢1 kloovu galiki , gbagburu
▢3 tablespoons akwukwo nri ohuru , gbuturu
zoro ezo ndagwurugwu ranchichin salad uzommeputa
Kwadebe bọta n'okpuru ma ọ bụrụ na ị na-eji ya.
Preheat Kingsford Ọkachamara Ọkụ ruo mgbe icheku ọkụ na-acha ntụ (ihe dịka 15 nkeji)
Debe steaks n'akụkụ kachasị mma nke imi ihe (ebe icheku ọkụ dị) wee chọọ nkeji 2 kwa akụkụ.
Bugharịa steaks na-enweghị isi na-ekpo ọkụ n'akụkụ nke imi ihe iji mezue nri iji chọọ okpomọkụ. (Maka 1 'ribeye steak na-esi nri ọzọ 4-5 nkeji mgbe ị gachara maka ọkara-obere ma ọ bụ mgbakwunye 6-7 maka ọkara)
Ozugbo ibe anụ ahụ eruola okpomọkụ achọrọ, wepụ ya na imi ihe. N'elu ya na butter ma obu butter butter ma zuo ike 5 nkeji oge iji kesaa juices.
Gwakọta ihe niile. Tinye na ihe mkpuchi plastik ma tụgharịa n'ime log. Refrigerate 1 awa.
Iberi n'ime gburugburu.
Mara: Iji nweta usoro obe, mgbe steak ga-ata ebe na ogo iri anọ na ise. Mgbe otu nkeji gachara, tụgharịa ogo 90. Tinyegharịa n'akụkụ nke ọzọ.
Calorisị:589,Carbohydrates:6g,Protein:51g,Abụba:40g,Abụba Ajuju:14g,Cholesterol:138mg,Sodium:Ogbe 124mg,Potassium:Ogbe 769mg,Eriri:abụọg,Sugar:1g,Vitamin A:35IU,Vitamin C:3.5mg,Calcium:75mg,Iron:5.9mg
N'ezieIsi N'ezie Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Ozugbo i jiri usoro a sie nri anụ ọhịa, ọ ga-aghọ ngwa ngwa gị! Ọ dị mfe ịme na ekpomeekpo bụ isi nzuzu! Pụrụ ịchọta ọzọ ukwuu grilling Ezi ntụziaka na Atụmatụ na Kingsford.com !
Zuru okè Grilling Akụkụ
Lemọn Parmesan Asparagus Grịl!
-esi mee ka a strawberry bilie
Mfe Okpu Osisi Ejiri Eghe
Nke a bụ mkparịta ụka nkwado m dere m n’aha Kingsford. Echiche na ederede niile bụ nke m.